Isitika sokudizayina ngokwezifiso Scratch Off Security sticker nge-QR Code, China Isitika sokwakheka okwenziwe ngokwezifiso Iskripthi Sokuphepha se-QR Code Abakhiqizi, Abahlinzeki, Ifektri - IHainan Tianjian Anti-Forgery Science & Technology Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Ilebula yokuphepha yekhodi ye-QR>Skrola Off Label Security ne-QR Code
Isitika sesakhiwo esenziwe ngokwezifiso se-Scratch Off Security ne-QR Code
Ama-Labling angama-Scratch Off anikezela ngobufakazi bokuthi kuphazamisekile futhi kugcinwe idatha iphephile
imvamisa ukuqinisekiswa kokuphepha nenjongo yokuphromotha. Ukuqinisekiswa kokuphepha, amaphasiwedi azokhonjiswa lapho kuklanywa, okulungele imikhiqizo yomkhiqizo, ukuvikela kumakhophi; futhi ngenhloso yokuphromotha, imiklomelo noma izipho zizokhonjiswa lapho ziqalwa, okulungele ukuphusha ukuthengisa.
1.Isinamatheli esine-scratch area, futhi singaphrinta ikhodi yezokuphepha ngaphansi kokubhala.
2. Ikhodi yezokuphepha imbozwe ungqimba lwesiliva, ungakwazi ukukhipha okuhlanganisiwe ukuthola ikhodi yokuphepha.
4. Ilebula ngayinye inekhodi ye-QR eyingqayizivele, engabona umbuzo wokulwa nobumbumbulu, ukuphathwa kokuthumela kanye nokulandelela.
5. Skena ikhodi ye-QR ukuze uqinisekise ubuqiniso ngokuhlola ukungaguquguquki kwezinhlamvu
6. Isinamatheli siyatholakala ukwenza ngezifiso (i-logoqe logo, izinombolo eziqondile, ihluzo, izici zokuphepha, njll.)
Ukudla, izipho, isiphuzo sebhodlela, ukuthunyelwa kwemithi njll.